सुन्दै अचम्म लाग्ने प्रेमकहानी, १२ बर्षीय विद्यार्थीबाट ३४ बर्षीया शिक्षिका गर्भवती – Pahilo Page
Wednesday July 28, 2021 |
सुन्दै अचम्म लाग्ने प्रेमकहानी, १२ बर्षीय विद्यार्थीबाट ३४ बर्षीया शिक्षिका गर्भवती
७ आश्विन २०७५, आईतवार २०:३१ 1811 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ७ असोज । संसारमा अनौठा अनौठा घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् । सुन्दै पनि अचम्मै लाग्ने घटना अमेरिकामा भएको छ ।
अमेरिकाका एक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षिबीचमा प्रेम चल्छ । प्रेम चलिरहँदा १२ वर्षीय एक बालकले ३४ वर्षकी शिक्षिकालाई गर्भवती बनाउँछन् । यो घटना अहिले भर्खरैको भने होइन । सन् १९९६ मा अमेरिकामा भएको हो । त्यस समय अमेरिकामा ती शिक्षिका निकै चर्चामा थिइन् ।
छोरा भन्न सुहाउने १२ वर्षीय बालकबाट गर्भवती भन्ने ३४ वर्षकी ती महिलाको नाम मेरी हो । उनी एक विद्यालयमा पढाउँथिन् । उनले पढाउने स्कूलमा एकजना १२ वर्षीय छात्रले पनि पढ्ने गर्थे । ती बालकको नाम विली हो । मेरी र विलीबीच यतिधेरै सामीप्यता कायम भयो कि उनीहरु एकअर्काको प्रेममा परे । उनीहरुबीच यौन सम्पर्क पनि भएछ । झण्डै एक वर्षसम्मको शारीरिक सम्पर्कमा रहेका उनीहरुका विषयमा गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । उनीहरुको सम्बन्ध अवैध थियो । त्यसैले नाबालिगसँग अवैध सम्बन्ध कायम गरेको आरोपमा मेरीलाई पुलिसले पक्राउ गर्यो ।
मेरीलाई जेल सजाय पनि भयो । तर जेलमा अनौठो घटना भयो । मेरीले जेलभित्रै बच्चा जन्माइन् । वास्तवमा उनको पेटमा विलीसँगको यौनसम्पर्कबाट बच्चा हुर्किरहेको थियो । बच्चा जन्मिएपछि उनलाई जेलमुक्त गरियो निगरानीमा रहने गरी । तर जेलमुक्त गर्ने बेलामा अदालतले उनलाई शख्त आदेश दिएको थियो, प्रेमी विलीसँग कहिल्यै पनि भेट गर्न नपाउने ।
अदालतको त्यस्तो आदेशका बावजूद जेलबाट निस्किनेबित्तिकै विलीले अदालतको आदेशको खिल्ली उडाउन थालिन् । उनी एकपटक विलीसँग कारभित्र आपत्तिजनक अवस्थामा रहेको बेला फेरि पक्राउ परिन् । त्यसपछि उनलाई सात वर्षको जेल सजाय भयो ।
यसमा रोचक कुरा त के भने त्यो बीचमा उनी फेरि गर्भवती भएकी थिइन् । उनले जेलमै दोस्रो बच्चा जन्माइन् । यसपटक भने उनलाई पूरै ७ वर्षको सजाय काटेपछि मात्र जेलमुक्त गरियो । सन् २००४ मा जेलमुक्त भएसँगै मेरी पुनः विलीसँग सम्बन्ध कायम गर्न थालिन् ।
जब विलीको उमेर २० वर्षको भयो र कानूनी रुपमा विहेका लागि योग्य बने तब विली र मेरीबीच वैधानिक रुपमा बिहे भयो । त्यतिबेला मेरी चाहिँ ४२ वर्षकी थिइन् । बिहेअघि नै उनीहरुका दुईवटा बच्चा जन्मिसकेका थिए । मेरी जेलमा रहेको बेला विलीकी आमाले ती दुबै बच्चाको हेरचाह गरेकी थिइन् ।
बिहेपछि मेरीले थप दुई सन्तान जन्माएकी थिइन् । अहिले मेरी र विली आफ्नो पूरै परिवारसहित वाशिङ्टनमा बस्दै आएका छन् । एक अन्तर्वार्तामा विली र मेरीले आफ्नोजस्तै स्थितिमा नफस्न आफ्ना बच्चाहरुलाई सचेत गराएका थिए ।
यस्ता पनि श्रीमान, साथीसँग सेक्स गर्न नमान्दा घुसाइदिए पत्नीको यौनाङ्गमा बेलन !
उमेरभन्दा ४० वर्ष कान्छी देखिन्छिन् यी महिला, के होला रहस्य ?
दुनियाँकै जब्बर मान्छे, जसलाई ११ हजार भोल्टको करेन्टले पनि छुँदैन
अनौठो चलन : जहाँ बिहेपछि हरेक रात ससुराली जानुपर्छ
रणवीर र दिपिकाको बिहे इटलीमा, ३० जनालाई मात्र बोलाइने
आलियाको फोटोमा आजकाल लाइकसमेत गर्दिनन् कट्रिना
एसईईकाे नतिजा आउने मिति ताेकियाे
ओली सरकारले हटाएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई नै पुनर्नियुक्तिको निर्णय
भैँसीलाई घाँस हाल्न गएकी मनकलाको गोठमै हत्या, थप अनुसन्धानका लागि तालिमप्राप्त कुकुर झिकाइँदै
नेपालमा डेल्टा प्रजातिको नयाँ म्युटेन्ट भेटियो
समीक्षा : गीत ‘लालीगुराँस’को, दोस्रो सम्बोधन अनु शर्मालाई
के बिहान धेरै सुत्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा पनि हुन्छ ?
आज साउन १३ गते बुधबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
प्रधानमन्त्री र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता
राष्ट्रपतिद्वारा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश प्रमुख पदमुक्त
विश्वभर तीन अर्ब ८८ करोड ५६ लाख ३१ हजार डोज खोप लगाइयो
मध्यपहाडी राजमार्गका आयोजना प्रमुखसहित पाँचविरुद्ध मुद्दा
प्रदेशको नामकरणबारे छलफल शुरु
स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा गम्भीर हुन विज्ञले दिए सुझाव
धुम्बाराही, काठमाडौं, नेपाल
प्रदेश २ : निरञ्जन साह
जीबी लामा [ओमन]
उद्धव मगर [कतार]
राज मल्ल [कुवेत]
उमेश बञ्जाडे [मलेशिया]
वीरेन्द्र केसी [जापान]
इमेल : pahilopage@gmail.com
© 2018 Pahilopage.com. All Right Reserved.